Ukusa okutsha kwabaPhandi baseAfrika njenge-TCC Afrika kunye ne-AfrikaArXiv Yazisa ukuSebenzisana okuSesikweni- i-AfrikaArXiv
E papashwe ngu I-AfricArXiv on I-22X ku-Okthobha i-2021 I-22X ku-Okthobha i-2021
The IZiko loQeqelelo loNxibelelwano (TCC Africa), esekwe kwiYunivesithi yaseNairobi, eKenya, kunye ne-pan-African Open Access portal I-AfricArXiv Ngokwenjenje sibhengeza isivumelwano sethu esisemthethweni sokusebenzisana ngenjongo yokudala indlela yeqhinga yexesha elide kunye nokuzinzileyo ekwakheni nasekulawuleni uluntu lwamazwe aphesheya oluza kunceda ukubonakala kophando lwaseAfrika.
Ubuhlakani be-TCC Afrika-yeAfrArArviv buza kuxhobisa amandla kunye nobungcali bemibutho yokuphucula inzululwazi evulekileyo, ukufikelela ngokuvulekileyo, izakhono zonxibelelwano zophando kunye nokwakha amandla phakathi kwezazinzulu nakwabanye abathathi-nxaxheba kwizifundiswa kwilizwekazi laseAfrika nakwihlabathi jikelele.
Ukukhuthaza ukufundiswa kweAfrika ekufumaneni ihlabathi
Ukuphucula iindlela zokuzinza malunga ne-African scholarship kunye neenkonzo zabafundi
Ukwakha indalo yelizwekazi yabathathi-nxaxheba
I-TCC Afrika iza kubonelela i-AfricArXiv ngomgaqo-sikhokelo wezomthetho kwaye isebenze njengombhexeshi wemali ukuququzelela ukusebenza kweAfricArXiv, uzinzo kunye nokukhula ngobuchule ngaphakathi e-Afrika. Ukongeza, i-TCC Afrika iya kuba lihlakani lokuxhobisa ngezakhono, inike uqeqesho nenkxaso kubaphandi baseAfrika nakwiziko lendlela yokusebenzisa ngokufanelekileyo i-portArriviv portal kunye neenkonzo.
“Olu bambiswano lumalunga nokwakha ukuthembana kubaphandi namaziko aseAfrika ngokudala iqonga lokushicilela elithembekileyo nelizinzileyo abanokulisebenzisa ukusasaza ukubonakala kwehlabathi kunye nokufunyanwa kweziphumo zophando lwabo. Sifuna ukuseka i-AfricArxiv njengenxalenye ebalulekileyo yokupapashwa kokuhamba komsebenzi kwabafundi baseAfrika. Ukuphumeza oku, sisebenza kunye, ”
Utshilo uNkskz Noyolo Owango, UMlawuli oLawulayo we-TCC e-Afrika.
“Oko sathi samiselwa ngeyeSilimela ngowama-2018, sifumene saza samkela ngaphezulu kwama-500 imibhalo-ngqangi yophando, iiseti zedatha, imiboniso yezilayidi kunye nezinye iintlobo zeziphumo zabafundi ezivela kumazwe angama-23 aseAfrika. Kude kube ngoku, ibiluhambo olonwabisayo olunamaqhuqhuva okufunda kuwo onke amalungu kwiqela lethu kwaye sizilungiselela ukusebenzisa iinkonzo zethu ngale ntsebenziswano, ”
uthi UGqr Jo Havemann, Umsunguli we-AfricArXiv kunye noMlawuli weSigqeba. UJohanssen Obanda, Umphathi wezoNxibelelwano kwi-AfricArXiv, uyongeza:
“I-TCC Afrika ngumxhasi oqinileyo kunye nomsebenzi wethu. Sijonge kakhulu ekukhonzeni abaphandi nakumaziko ophando kwilizwekazi liphela ngemizamo edibeneyo ukusukela ngoku. ”
I-AfricArxiv xa usithi krwaqu
Malunga ne-TCC yase-Afrika
Yasekwa njengeziko elingenzi nzuzo kwi-2006 kwaye yabhaliswa eKenya, iZiko loQeqesho kwezoNxibelelwano (i-TCC Afrika), liBhaso lokuThembela eliwonga amabhaso kunye neziko lokuqala loqeqesho olusekwe e-Afrika ukufundisa izakhono zonxibelelwano ezisebenzayo kwizazinzulu. Njengenxalenye yesigunyaziso sayo esiphambili, i-TCC Afrika ibonelela ngenkxaso kunye nomthamo ekuphuculeni iziphumo zabaphengululi kunye nokubonakala ngoqeqesho kunxibelelwano lwabaphengululi nakwinzululwazi.
IiHashtags: #SciComm # TCCat15
Ukusukela ngo-2018, i-AfricArXiv yindawo yokugcina ekhokelwa luluntu ekhokelela kuluntu kuphando lwase-Afrika. Amaqabane e-AfricArXiv kunye neenkonzo ezigciniweyo zokugcina ulwazi ukubonelela ngamaqonga ezenzululwazi zase-Afrika ukuba zinxibelelane nabanye abaphandi kwilizwekazi lase-Afrika kwaye babonise iziphumo zophando.
iindidi:	iZazisoUkudibanaUkuFikelelaVula iSayensi
tags: Ukufunyanwa kophando lwaseAfrikafikelela ufikelelouvulele isayensiCinezelaI-TCC yase-Afrika
Iqonga laseAfrika loPhando lwaseAfrika | Isantya seCCC soMxholo wePodcast	· Nge-14 kaNovemba 2021 ngo-5:01 emva kwemini
[…] esekwe kwiYunivesithi yaseNairobi, eKenya, kunye ne-pan-African Open Access portal i-AfricArXiv ivumile ukukhuthaza indlela yexesha elide yobuchule nezinzileyo yokwakha nokulawula amazwe ngamazwe […]